Home » Lahatsoratra mampiavaka » Afrika Elephant Coalition (AEC): Japon ny tsenanao ivoara!
Ny filankevitry ny loholona ao amin'ny African Elephant Coalition (AEC) izay misy firenena afrikanina 32 sy ny ankamaroan'ny fanjakana afrikanina elefanta dia miantso ny governemanta Japana hanidy ny tsenany ivoara, eo amin'ireo lehibe indrindra manerantany, ary hanohana ny fiarovana mafy kokoa ireo elefanta ao Afrika.
“Miantso an'i Japon izahay hanaraka ny ohatr'i Sina ary hanidy ny tsenan'ny ivoara anatiny. Mino izahay fa ny fanamafisana izany dia hanamafy ny endrika fiarovana iraisampirenena japoney mialoha ny Lalao Olaimpika sy ny Paralimpika 2020 ”, hoy i Azizou El Hadj Issa, filohan'ny filankevitry ny loholona ao amin'ny AEC, tamin'ny antso avo ho an'i Taro Kono, minisitry ny raharaham-bahiny Japon hanohana ny Coalition.
izy dia nanoratra tany amin'ny minisitry ny raharaham-bahiny any Japon, Taro Kono, ny filankevitry ny loholona AEC, nangataka fanampiana sy fiaraha-miasa hanamafisana ny fepetra iraisam-pirenena amin'ny fampihenana ny fangatahana ivoara elefanta "mba tsy ho zavatra ilaina intsony ny vorona elefanta".
Ny AEC dia nanolotra antontan-taratasy maromaro ho an'ireo 18th Fihaonamben'ny antoko amin'ny Fifanarahana momba ny varotra iraisam-pirenena amin'ny karazan-java-maniry tandindomin-doza any Wild Fauna sy Flora (CITES) ary mangataka amin'i Japon hanohana ny tolokevitr'izy ireo hanamafisana ny fiarovana ny elefanta.
Manokana, maniry ny AEC:
Ny firenena rehetra hanaraka ny ohatra nasehon'i Shina tamin'ny fanidiana ny tsenan'ny ivoara anatiny tamin'ny alàlan'ny fanamafisana ny vahaolana (10.10) tamin'ny fivorian'ny fivoriambe.
Tanisao tsara ireo elefanta afrikanina rehetra Fanampiny I, ny fiarovana mafy indrindra azo atao eo ambanin'ny CITES. Amin'izao fotoana izao, ny elefanta any Afrika dia mizara lisitra miaraka amin'ireo elefanta ao Botsoana, Namibia, Afrika atsimo ary Zimbabwe any Fanampiny II, izay mamela ny varotra amin'ny toe-javatra sasany.
Efa ela ny AEC dia nihevitra fa raha tokony harovana tanteraka ny elefanta dia tsy maintsy tafiditra ao anaty lisitra ao amin'ny Appendix I izy ireo. Niteraka fikorontanana ny fangatahan'ny mpanjifa ary niteraka fivarotana ivoara, izay mitohy. niroborobo taorian'ny fivarotana tahiry ivoara avy any atsimon'i Afrika ka hatrany Sina sy Japon tamin'ny taona 2008. Nanidy ny tsenany i Sina tamin'ny taona 2017, fa ny tsena ivory japon kosa dia iray amin'ireo lehibe indrindra manerantany, ary misy porofo lehibe fa ivoara avy any Japon dia aondrana tsy ara-dalàna any Shina amin'ny vola marobe, manimba ny fandrarana.
Ny Coalition dia manentana ireo tsena ivory manan-danja ao an-toerana - indrindra ireo any Japon sy ny Vondron Eropeana - hanaraka ny ohatr'i Shina. Ny taratasy ho an'i Minisitra Kono manao antso avo any Japon hanidy ny tsenany ivoara, ary adika amin'ny Minisitra misahana ny tontolo iainana, Yoshiaki Harada, ary koa ny Toekarena, Varotra ary Indostria, Hiroshige Seko, izay samy tompon'andraikitra amin'ny fanaovana politika amin'ny varotra ivoara, fanaraha-maso ny varotra ivoara anatiny sy ny fampiharana ny vahaolana CITES mifandraika amin'ny ivoara (10.10) any Japon. Mino ny filankevitra fa ny fanidiana ny tsenany ivoara dia “hanamafy ny endrika fiarovana iraisampirenena japoney mialoha ny lalao olimpika sy ny paralimpika 2020”.
Ny filohan'ny filankevitry ny loholona, Azizou El Hadj Issa, dia nanoratra tany amin'ny Minisitry ny raharaham-bahiny sinoa ihany koa, Wang Yi, maneho ny fankasitrahany ny “politika momba ny fitehirizana tantara manan-tantara nataon'i Shina tamin'ny fanidiana ny tsena ivory anatiny teo ambany fitarihan'ny filoha Xi Jingping”, ary nangataka an'i Shina izy hanohana ireo tolokevitry ny AEC.
Ireo taratasy ho an'ny firenena roa tonta dia mitanisa ny vao nivoaka Tatitra momba ny fanombanana manerantany momba ny serivisy biodiversity sy ny tontolo iainana, izay manasongadina ny maha maika ny fiarovana ireo karazana tandindonin-doza toa ny elefanta. Hitan'ny tatitra fa ny fitrandrahana elefanta amin'ny varotra dia manafaingana ny fahafatesany. Ny filankevitry ny loholona ao amin'ny AEC dia nampitandrina fa ny elefanta afrikanina dia tsy nahomby hatrany ny elefanta afrikanina, izany no tandindon'ny fifanarahana.
Ireo litera roa ireo dia manasongadina fa ny AEC dia maneho feo miray amin'ny ankamaroan'ny fanjakana elefanta afrikana ary mifanaraka amin'ny fihetsiky ny besinimaro sy ny mpahay siansa elefanta. Firenena afrikanina vitsivitsy - notarihin'ny nataon'i Botswana - mbola te hitrandraka elefanta ho an'ny ivoara. Na izany aza, ny iraka ataon'ny Coalition 32-firenena dia ny hitazomana ny elefanta velona sy salama ary tsy misy fandrahonana amin'ny varotra ivoara iraisam-pirenena.
Mikasa ny hiditra ao amin'ny UNWTO i Etazonia